China clear cast acrylic sheet vagadziri uye vanotengesa | Gokai
Bvisa cast acrylic sheet
Chinokosha Bvisa cast acrylic sheet
Zviyero 1,220 x 2,440mm, uye 1,220 x 1,830mm uye 2050 * 3050mm ect.
Ukobvu 1.8mm kusvika 100mm
Kuwandisa 1.20g / cm3
Mavara Yakajeka, mavara, semi-tansparent, fluorescence
Raw zvinhu PMMA
Hunhu 1. Yakajeka, Transparency rate inogona kuenda pamusoro pe 95%.
2. inogara kwenguva refu. Yakanyanya kupenya, nyore kuchena.
3. Nyore kuumbwa. Kwete-chepfu.
1. Kwakanaka Kujeka: isina ruvara, yakajeka plexiglass jira, mwenje wekutepfenyura mwero we92% kana kupfuura
2. Kunaka kwemamiriro ekunze kusagadzikana: kuchinjika kune yakasikwa nharaunda, kunyangwe kwenguva yakareba muchiedza chezuva, mhepo nemvura hazvizoshandure zvivakwa, anti-kukwegura zvivakwa, zvinogona zvakare kuve zvakachengeteka kushandisa kunze.
3. Maitiro ekugadzirisa akanaka: kwete chete akakodzera kugadzirwa kwemuchina uye nyore kupisa kupisa kuumbwa, acrylic sheet inogona kuvezwa, iyo yepamusoro inogona kuvezwa, kudhinda kwechidzitiro kana yekuvhara mweya.
4.Kunakira kuita: akasiyana akisi acrylic jira, rakapfuma, uye rine rakanakisa mashandiro, richipa vagadziri vane dzakasiyana siyana sarudzo, acrylic jira inogona kuvezwa, iyo yepamusoro inogona kupendwa, yekudhinda skrini kana yekuvhara.
5. Isina chepfu: Kunyangwe nekuratidzwa kwenguva refu kunogona zvakare kukuvadza vanhu, uye hakuburitse magasi ane chepfu kana atsva.
• Kushambadzira:Silk chinovhara yokudhinda, achiita zvokutemera zvinhu, inoratidzirwa bhodhi, denoters;
• Kuvaka & Kushongedza: Mapepa ekushongedza ekunze nekunze, matura ekuchengetera;
• Mota & Motokari: Zvemukati zvekushongedza zvinhu zvemabhazi, chitima, subway, steamships;
• Fanicha Fenicha yemahofisi, kabhini kabhineti, kabati yekugezera;
• Maindasitiri Chikumbiro: Thermoformed zvigadzirwa, firiji yekuchengetera chirongwa, kuchengetedza kwezvakatipoteredza mainjiniya;
• Vamwe: Kuumba bhodhi, zvemitambo zvishandiso, kubereka matanda, kumahombekombe hunyoro zvivakwa zvivakwa, mvura isingamiriri matanda, hunyanzvi zvekushandisa, ese marudzi emwenje akaparadzanisa mahwendefa.
Pashure: yakakwirira yakajeka yakajeka acrylic sheet
Zvadaro: akwariyamu acrylic machira
3mm Bvisa Acrylic Sheet
Acrylic Sheet Yakajeka
Bvisa Acrylic Plastiki Mapepa
Bvisa Acrylic Sheet Pedyo neni
nhema cast acrylic sheet
1mm acrylic machira
namira acrylic girazi jira